Who We Are » AquaLuz
I ukunikezela AquaLuz othisha bami uSawule David Raye and Miguel Angel abangisizile balolonge futhi wabelane lombono sokuphulukiswa, le nguqulo kokuhlonipha amaplanethi. Futhi, kunjalo, I ukunikezela AquaLuz to the Mother – Lakshmi, Country, Ixmel, Pachamama, Mother Mary, Ishtar, futhi bonke abanye omama sonke.
Fukushima bekulokhu udrako ngavusa me up to ingozi futhi isifo esithwalwa emanzini Emhlabeni lethu. Wonke amanzi Emhlabeni axhunyiwe futhi amelaphe amanzi ethu endawo, thina ukuphulukisa zonke amanzi, kuhlanganise olwandle Pacific.
AquaLuz is a emcimbini global usilethelani kanye ngenhloso, vibration, Umthandazo, kanye incarnation ukukhanya – amakristalu. Ungaqala manje umfutho amakristalu yakho nemithandazo yakho siqu, chants, izinhloso ukuze kuthi lapho sibeka kubo ndawonye emanzini eMhlabeni, bayoligcina uthando lwethu namandla ephulukisa. Sizokwenza uwabeke emanzini on the Fall Equinox Eva kanye sithi 'Om Mani Padme Hum’ – ukubeka energy zethu emanzini, the jewel singene lotus.